Duqeyn lagu hoobtay oo ka dhacday deegaanka Cali Fooldheere ee degmada Mahaday – idalenews.com
Idalenews-Maamulka degmada Mahaday iyo saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga ayaa sheegay in duqeyntaas lala beegsaday saraakiil ka tirsan Alshabaab ayna waxyeelo ka soo gaartay saraakiil ka tirsan Alshabaab .
Hase yeeshee maamulka degmada Mahaday iyo saraakiisha u hadashay ciidamada xoogga dalka ayaan sheegin tirada dadka wax ku noqday duqeyntan.
Ma jirto illaa iyo hadda warar madax banaan oo xaqiijinaya duqeyntan iyo qasaaraha ka dhashayba. Balse deegaanka Cali Fooldheere ayaa dhowaan waxaa la wareegay ciidamo isugu jira kuwa dowlada iyo AMISOM ka tirsan waxaana halkaas fariisimo ka sameystey ciidamada AMISOM.
Deegaanka Cali Fooldheere ayaa ceelkii ku yiil waxaa la sheegay inay qarxiyeen ururka Alshabaab kahor inta aysan ka bixin, waxaana halka kaliya ee biyaha laga helo ay tahay war biyo aan nadiif ahayn oo midabkoodu isbedelay.